अभिनेता सुशान्तको मृत्यु प्रकरण : उनकै बहिनीविरुद्धनै एफआईआर दर्ता - Samajik Patra
अभिनेता सुशान्तको मृत्यु प्रकरण : उनकै बहिनीविरुद्धनै एफआईआर दर्ता
भारतीय अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको मृत्यु प्रकरणर बारे सोमबार राति मुम्बई प्रहरीले सुशान्तकै बहिनी बहिनीविरूद्ध एफआईआर दर्ता गरेको छ ।
रियाका अनुसार उनले सुशान्तलाई सम्झाउने प्रयास गरेकी थिइन् कि सुशान्तले डाक्टरले भनेका औषधि मात्र खानुपर्छ, बहिनीले भनेको औषधि खान हुँदैन, किनकि उनले कुनै मेडिकल डिग्री लिएकी छैनन्। सुशान्तकी बहिनी र डाक्टर तरुणकुमारले नक्कली प्रेस्क्रिप्सन बनाएको उनको आरोप छ
सुशान्त मृत्यु प्रकरण: नयाँ रहस्य फेला ? एनसीबीद्वारा फेरी अर्का एक व्यक्ति पक्राउ !
सुशान्त मृत्यु प्रकरण: उनकै प्रेमिकाका भाइ पक्राउ
मंगलवार, भाद्र २३ २०७७०८:१४:२३
कंगनालाई पर्यो फसाद, अफिसमा प्रहरीले मार्यो छापा !!
भारत र चीनबीच लद्दाखमा तनाब बढ्यो , चल्यो दोहोरो फ़ाइरिङ